Rita, Writing for My Sake!: May 2009
စာအုပ်တစ်အုပ် (5 lb ခန့်) မြန်မာပြည်သို့ ထည့်ပေးလိုက်ချင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်ရောက်လျှင် အိမ်တိုင်ရာရောက် လာယူပါလိမ့်မည်။
(ပိုက်ဆံ သိပ်မကုန်နိုင်ဘူး ဆိုလျှင်တော့ Agent နဲ့ပဲ ပို့ပါမည်။)
Posted by Rita at 5/25/2009 11:28:00 PM3comments Links to this post
Posted by Rita at 5/16/2009 06:50:00 PM 15 comments Links to this post
Posted by Rita at 5/14/2009 10:20:00 PM 10 comments Links to this post
Posted by Rita at 5/13/2009 08:11:00 PM4comments Links to this post
(ဆရာ မြသန်းတင့်ရဲ့ အခန်းဆက် ဘာသာပြန် နဲ့ ပေဖူးလွှာ)
WN >>> ၀တ္ထုတိုအကြောင်း ပြောရင်း ကျွန်တော် ဖြတ်မေးပါရစေ။ ဆရာမကို ကျွန်တော်က အချစ်ဝတ္ထုရေး ဆရာမလို့ ကင်ပွန်းတပ်ရင် လက်ခံနိုင်မလား။ (စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ကျွန်တော် ဒီလိုမေးတော့ ဆတ်ဆတ်ခါ နာဖူးလို့ပါ။)
Juu >>> ဒါကတော့ ဘယ် စာရေးသူမဆို အချစ်ဝတ္ထုရေးဆရာ လို့ နာမည်တပ်ခံရရင် အနည်းနဲ့ အများ အောင့်သက်သက် ဖြစ်ကြမှာ ချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တခြားစာပေ အမျိုးအစားပါ ရေးတဲ့ စာရေးဆရာတွေကပေါ့။
ကျွန်မကတော့ အချစ်ဝတ္ထုကို အရေးများတာ အမှန်ပဲ။ အချစ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချိန်မှာ အချစ်ကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေးခေါ်စဉ်းစားပြီး အချစ်ဝတ္ထုတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကို အချစ်ဝတ္ထု စာရေးဆရာမလို့ နာမည်တပ်ရင်တော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်ခံမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကျွန်မ အခု အချိန်ထိ ၀တ္ထုတို ၂၁ ပုဒ် ရေးပြီးပြီ။ ဒီအထဲမှာ အချစ်ဝတ္ထု မဟုတ်တာဆိုလို့ ရှစ်ပုဒ်ပဲ ပါတယ်။ အဲဒီ ၀တ္ထုတွေကို ကျွန်မ ရေတွက်ပြမယ်။
၁) အဝေးဆုံး ခရီးသို့ အနီးဆုံး အချိန်
၂) သူမ၏ မိုး
ရ) ကောင်းကင်မပါသော ည
၈) ကျီစားပျက်ရယ် (အဲဒါက ကောလိပ် မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ရေးတဲ့ ၀တ္ထုပါ)
ဒီတော့ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် အချစ် ၀တ္ထုက ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိတယ်။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုတဲ့ အတွက် ကျွန်မက အချစ်ဝတ္ထုရေးဆရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အချစ်ဝတ္ထုရေးရတဲ့ အခက်အခဲပဲ။ အချစ်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ ရတဲ့ အချိန်မှာ ရေးရင် အဲဒီ အချစ်ဝတ္ထု ပြောင်မြောက် ပီပြင်မှာပဲ။ လူ့ဘ၀ကို စိတ်ညစ်ညူးစရာ အနိဋ္ဌာရုံတွေအဖြစ် စိတ်ကုန်းခမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ အချစ်ဝတ္ထုကို ရေးဖို့ မကြိုးစားနဲ့။ အလကားပဲ။ ကျွန်မဖြင့် အခု အချိန်မှာ အချစ်ဝတ္ထုရေးဖို့ တော်တော် စိတ်ကုန်နေပါပြီ။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာ အမှတ်တရ ကို ရေးခဲ့တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ရေးခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အခု ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ လုံးချင်းဝတ္ထု အသစ် ရေးကြည့်တယ်။ တော်တော် ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ပါပဲ။ ဒီသုံးနှစ်အတွင်း ကျွန်မ ၀တ္ထုတို ၅ ပုဒ် ရေးဖြစ်တယ်။ ၅ ပုဒ်လုံး အချစ်ဝတ္ထု မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မကို ဘယ်လိုပဲ ကင်ပွန်းတပ်တပ် ကျွန်မ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ၀တ္ထုရဲ့ အနှစ်သာရပါ။ အချိန်က အဆုံးအဖြတ် ပေးပါလိမ့်မယ်။
WN >>> ဆရာမ စာဖတ်ပါသလား။
(စကားချပ်။ ။ ဘယ့်နှယ် မေးခွန်းပါလိမ့်။ မသကာ ဆရာမ စာတွေ အများကြီး ဖတ်ခဲ့ဖူးမှာပေါ့နော် လို့ ပြောရင် ဟုတ်တုတ်တုတ်။ အဲဒီ ခေတ်က ဂျူး မို့လို့ပေါ့။ ဒါမျိုး ဘလော့ခေတ်မှာ လာမေးလို့ကတော့ ကောင်းကောင်း အဆော်ခံရမယ့် ဖြစ်ခြင်း။ မြင်းခွာ တစ်ချက်ပေါက်ရုံနဲ့ မီး ဟုန်းဟုန်းတောက်သွားမယ်။ ဘာမှတ်လဲ :D )
Juu >>> ကျွန်မ အချိန်အား ရတဲ့ အခါတိုင်း တတ်နိုင်သမျှ စာဖတ်ပါတယ်။
WN >>> ဘယ်လို စာမျိုးတွေ ဖတ်ပါသလဲ။
Juu >>> ဖတ်တဲ့ စာကတော့ အစုံပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်တဲ့ စာက တစ်မျိုး။ စာရေးဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ ဖတ်တဲ့ စာက တစ်မျိုး။ စာစရေးတဲ့ အချိန်မှာ ဖတ်တာက တစ်မျိုး။ အခု စာရေးဆရာလို့ အများက သတ်မှတ်လာကြတဲ့ အချိန်မှာ ဖတ်တဲ့ စာက တစ်မျိုးပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး စာရေးဆရာ ဖရန်စစ် ဘေကွန် ပြောတဲ့ စကားတစ်ခု ရှိတယ်။ တချို့စာက မြည်းကြည့်ဖို့ ကောင်းတယ်။ တချို့စာကို မြိုချရမယ်။ တချို့စာကတော့ ကြေညက်အောင် ၀ါးစားဖို့ ကောင်းတယ်တဲ့။ စာအမျိုးမျိုး ရှိတဲ့ အထဲမှာ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံး စာ အမျိုးအစားကတော့ ၀တ္ထုတိုပဲ။ ဒီတော့ ၀တ္ထုတိုတွေ အဖတ်များပါတယ်။ ဒါကလဲ ကျွန်မ လက်လှမ်းမီ သလောက်ပေါ့။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက်၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေနဲ့ အချိန်ပေးနိုင်သလောက်ပေါ့။
မြန်မာစာကို စပြီး ၀ါသနာပါတဲ့ အရွယ်ကတော့ ကဗျာ့ပန်းကုံး စာအုပ်၊ ကဗျာသီကုံးနည်း စာအုပ်တို့ က၀ိဘာရထီကျမ်းတို့၊ အဲဒါတွေကို လေ့လာကျက်မှတ်ခဲ့တယ်။ ဒွေးချိုး၊ လေးချိုး၊ တေးထပ်၊ ရတု၊ ဘောလယ် ရေးနည်းတွေကို ဥဒါဟရုဏ်တွေနဲ့ ဖော်ပြထားတာ အလွန် စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီ အထဲမှာ ကျွန်မ သဘောအကျဆုံး ကဗျာ အမျိုးအစားက ရတုပါ။ နတ်သျှင်နောင်ရဲ့ ရတုတွေ၊ ရဝေရှင်ထွေးရဲ့ ရတုတွေ၊ ဓာတုကလျာရဲ့ ရတုတွေနဲ့ န၀ဒေး ရတုတွေ၊ ဒါတွေ တော်တော်များများကို နှစ်သက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ခြောက်တန်း၊ ခုနစ်တန်း လောက်ကစပြီး ရတုစပ်နည်း ပေါင်းစုံကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာခဲ့တယ်လေ။ စကားပြေ အနေနဲ့ကတော့ မင်းပူး ဦးသြဘာသရဲ့ ဝေဿန္တရာ ဇာတ်တော်ကြီးပေါ့။
Posted by Rita at 5/12/2009 09:24:00 PM6comments Links to this post
Posted by Rita at 5/11/2009 09:34:00 PM7comments Links to this post
(ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး။ ပုံတစ်ခုခု ထည့်ချင်တာနဲ့)
တောက်တဲ့ ဆိုတာမျိုးက တွယ်မိရင် မခွာတော့ဘူး မဟုတ်လား။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ အပြင် ခဏ သွားနေတုန်း အဆောင်စောင့် အဖိုးကြီးနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းက သတ်ပစ်လိုက်သလား၊ ခြောက်ထုတ်လိုက်သလား မသိ၊ သူပြန်လာတော့ တောက်တဲ့ကြီးကို မတွေ့တော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက တော်တော် လန့်ဖို့ကောင်းတယ်။
"ဒီအဖြစ်ဟာ သွေးရိုးသားရိုးမှ ဟုတ်ပါ့မလားဟင်" တဲ့။
ကျွန်မတို့ အဲဒီလို ပြောဆို ဆွေးနွေး၊ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပြီး လတွေ ရက်တွေ ကြာလာတော့ ကျွန်မ သူ့ကို အကြံပေးမိတယ်။ နင် ဒီအကြောင်းကို ၀တ္ထုရေးပါလားလို့။ အဲဒီတော့ သူက လက်ရှောင်တယ်။ သူ မနိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ် တဲ့။ ကျွန်မ ရေးချင်ရင် ရေးပါလား လို့ ခွင့်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ရေးဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီး တော်တော်နဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အမေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်းပါးပါး ပါရမှာ ဆိုတော့ ကျွန်မ လက်တွန့်နေခဲ့တာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မ အားတင်းလိုက်တယ်။ ကျောင်းသူလေးရဲ့ နေရာမှာ ကျွန်မ ၀င်နေကြည့်တယ်။ ခက်တာက တောက်တဲ့ ဆိုတာကို ကျွန်မ တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ နီးနီးကပ်ကပ် မမြင်ဖူးဘူး။ ဒီတော့ တောက်တဲ့ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခြား သတ္တ၀ါ တစ်ခုကို အစားထိုးဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။
ဒီမှာ ကျွန်မ စဉ်းစားမိတာက မကွေးက မြွေ အလွန်ပေါတဲ့ အရပ် ဆိုတာပါပဲ။ နောက်ပြီး မြွေဟာ တောက်တဲ့ထက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။ သူက ၀တ္ထုကို ပိုပြီး serious ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့လည်း တွက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မဟာ မြွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ၊ နိုင်ငံခြား ၀တ္ထုတွေကို လေ့လာ ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်ကို ကျွန်မ ဖြည့်ပြီး ဖန်တီး ယူလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ၀တ္ထုကို ရေးရင်း ရေးရင်း အဖြစ်အပျက်ကို ကြောက်ရွံ့လာလို့ စာအုပ်နဲ့ ဖောင်တိန်ကို ပစ်ချလိုက်ရတဲ့ ရက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ခြောက်လ၊ ခုနစ်လလောက် ကြာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ၀တ္ထု ပြီးသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီ ၀တ္ထုရေးရင်း ဘယ်နှစ်ကြိမ် မျက်ရည်ကျမိသလဲ ဆိုတာ မမှတ်မိဘူး။
စာရေးရင်း မျက်ရည်ကျရတဲ့ ၀တ္ထုဆိုလို့ နှစ်ပုဒ်ပဲ ရှိပါတယ်။
တစ်ပုဒ်က အမေ၊ တစ်ပုဒ်က အဝေးဆုံး ခရီးသို့ အနီးဆုံး အချိန် ၀တ္ထုပါပဲ။
Posted by Rita at 5/11/2009 09:05:00 PM2comments Links to this post
WN >>> ဆရာမ ၀တ္တုတိုတွေကလည်း တစ်ပုဒ်ရေးရင် ရေးသလောက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ၀တ္ထုတိုကို ထိထိရောက်ရောက် ဖန်တီးတတ်တဲ့ ဆရာမရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်ရအောင် ကုန်ကြမ်း ဘယ်လို ရှာတယ် ဆိုတာက အစ ဘယ်လို ရေးရမယ် ဆိုတာ အထိ ဥပမာ တစ်ပုဒ်လောက်နဲ့ ပြောစေချင်ပါတယ်။
Juu >>> ဒီနေရာမှာ ကျွန်မ ပြောချင်တာက ကုန်ကြမ်းရှာတယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ကျွန်မနဲ့ အံမ၀င်တဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ကျွန်မက ဆေးကုသတဲ့ အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတဲ့ လူ ဆိုတော့ စာရေးတဲ့ အချိန်ဟာ ဆေးကုတဲ့ အချိန်နဲ့ စာရင် သိပ်ကို နည်းပါတယ်။ စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းကိုလည်း ရှာစရာ မလိုဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အာရုံထဲကို ၀င်လာတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေး တစ်ခု၊ ခံစားမှု တစ်ခုကို အတတ်ပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်မအတွက် ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ် ရလာပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် အာရုံဝင်စားဖို့က တစ်လ ကြာချင် ကြာမယ်။ တစ်နှစ် ကြာချင် ကြာမယ်။ သူ့အလိုလို ပေါ်လာတာ မဟုတ်ဘဲ ရှာယူရတဲ့ ကုန်ကြမ်းမျိုးကို မူတည်ပြီး (အခု အချိန်ထိ) ၀တ္ထု မရေးတတ်သေးပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မ ပြောနိုင်တာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ် ဘယ်လို ရလာတယ် ဆိုတာမျိုးလေ။ ဘယ် ၀တ္ထု အကြောင်း ပြောကြမလဲ။
WN >>> ကျွန်တော် ပြောစေချင်တာကတော့ ပေဖူးလွှာမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အမေ ၀တ္ထုပါ။
Juu >>> ကျွန်မ ရေးခဲ့သမျှ ၀တ္ထုတိုတွေထဲမှာ ၀တ္ထုတို ရေးနည်း အတတ်ပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နှစ်သက် ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့သလောက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ဖတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်မရဲခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုမျိုးရှိတယ် ဆိုရင် အဲဒါ "အမေ" ၀တ္ထုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာ အမျိုးသမီး အများစုလိုပဲ ကျွန်မက အမေကို သိပ်ချစ်ပြီး၊ သိပ်အထင်ကြီးခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အမေက ထက်မြက်တယ်၊ ရဲရင့်တယ်၊ ဉာဏ်ကောင်းတယ်၊ ဟန်မဆောင်တတ်ဘူး၊ ရိုးသားပွင့်လင်းတယ်၊ ဘာပကာသနမှ မရှိတဲ့ ကျေးရွာနေ စရိုက် လက္ခဏာမျိုး ရှိတယ်။ အမေ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က ဆုံးသွားတော့ အမေ့ အကြောင်းကို ၀တ္ထုရေးဖို့ တခါတခါ စိတ်ကူးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အမြဲတမ်း နောက်ဆုတ်ခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်လက် ကိုယ်မယုံလို့ပဲ။ အမေ့ အကြောင်းကို သရုပ်ဖော်နိုင်လောက်အောင် ကျွန်မလက်က ထိုက်တန်ရဲ့လားလို့ အမြဲ သံသယ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချိန်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရလာရင်တော့ ရေးဖြစ်မလား မသိဘူး။
ဒီနေရာမှာ အမေနဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ အတွက် မဆီမဆိုင်ဘဲ ဖြတ်ပြောရဦးမယ်။ မနှစ်က ထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းလား ဘာလား မမှတ်မိဘူး။ သိပ်မကြာသေးတဲ့ မဂ္ဂဇင်း အသစ်ထဲမှာစာရေးစရာ တစ်ယောက်က အမှတ်တရရဲ့ မကောင်းသတင်းတွေ ဆိုးကွက်တွေကို ကဗျာရှည် တစ်ပုဒ်နဲ့ ရှုပ်ချခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ပုဒ်လုံး အနေနဲ့ ဘာမှ မပြောချင်ပေမယ့် အမေနဲ့ ပတ်သတ်တာတော့ တိုက်ဆိုင်လို့ ပြောပြဦးမယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ သူက အမှတ်တရ ၀တ္ထုမှာ အမေ ဆိုတဲ့ စကား လုံးဝ မပါတဲ့ အတွက် စာရေးသူကို ပြစ်တင် ရှုပ်ချ ကဲ့ရဲ့ ချင်တဲ့ သဘောမျိုး ရေးထားတယ်။ အမေ မွေးထုတ်ခဲ့လို့၊ အမေ ထောက်ပံ့ခဲ့လို့သာ တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်နိုင်တာမို့ အမေ့ အကြောင်း လုံးဝ မပါတော့ အပြစ်ကြီး တစ်ခုလို့ သူ ဆိုချင်တယ်နဲ့ တူတယ်။
အမှတ်တရ မှာ ကျွန်မ ဖွဲ့ခဲ့တာက ချစ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်၊ သဘောတရား၊ အယူအဆ ဒါတွေပဲ မဟုတ်လား။ ဒီဝတ္ထုမှာ အမေအကြောင်းလဲ မလိုဘူး။ အဖေအကြောင်းလဲ မလိုဘူး။ ဗီလိန်လဲ မလိုဘူး။ သူတို့ချင်း ကွဲရတာဟာ မောင့်ဘက်က ချွတ်ယွင်းမှု၊ ပျက်ကွက်မှု တစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲ။ ကြားလူဖျက်လို့ ပျက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူးလေ။
ထားလိုက်ပါတော့ အဲဒီ အကြောင်း။
အခုန ပြောတဲ့ အမေ ၀တ္ထုမှာ ဇာတ်ကောင်ဆိုလို့ အမျိုးသမီးလေး တစ်ယောက်ပဲ ပါတယ်။ သူက မကွေးကောလိပ်မှာ ကျောင်းဆောင်နေတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်လေ။ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ မူရင်းကို ကျွန်မရဲ့ ညီမလေး ၀ိုင် ဆီက ရပါတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်မက အိမ်မှာ အရင်းနှီးဆုံး၊ အပွင့်လင်းဆုံး သူငယ်ချင်းပေါင်း ပေါင်းတဲ့ ညီအစ်မပါ။ သူက ကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်ပြန်လာတဲ့ တစ်နေ့တော့ ကျွန်မကို သူ့ အိပ်မက် အကြောင်း ပြောပြတယ်။ အမေ့ကို အိပ်မက်မက်တဲ့ အကြောင်းပေါ့။ အိပ်မက် မက်ပြီး နှစ်ရက် သုံးရက်အတွင်း သူ့အခန်း နံရံမှာ တောက်တဲ့ကြီးတစ်ကောင် ဘယ်လို ရောက်လာမှန်းမသိ ရောက်လာခဲ့တယ် လို့ပြောပါတယ်။ တစ်ခန်းတည်းနေ သူငယ်ချင်းရော သူရော ကြောက်လန့်ပြီး ခြောက်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသတဲ့။ ဘယ်လို ခြောက်ထုတ်ထုတ် နေရာမရွေ့ဘဲ တွယ်ကပ်နေတာပဲတဲ့။
တိုက်ဆိုင်မှုပါပဲ။ အမေနေ့မှာ အမေအကြောင်းပြောတဲ့ အပိုင်းကို တင်မိတယ်။ ကိုနေဒေးသစ် ပြောလို့ သတိထားမိတာပါ။ ကျွန်မဘာသာဆို အမေနေ့တွေ အဖေနေ့တွေ သူငယ်ချင်းနေ့တွေ ချစ်သူများနေ့တွေ သတိမထားမိတတ်ပါဘူး။ (ကျွန်မက gazetted holiday တွေပဲ သတိထားတာမို့။)
သတိရစေတဲ့ comment ပေးသွားတဲ့ ကိုနေဒေးသစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံကို မြန်မာ အမေပုံ ထည့်ချင်ပေမယ့် ကျွန်မ လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ရှာမရတာမို့ ကရုဏာတွေ ခံစားလို့ရတယ်လို့ ခံစားမိတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို ထည့်ထားပါတယ်။ Google ကပဲ ရှာပါတယ်။
အဲဒီပုံက မေမေ (ငယ်ငယ်က) နဲ့တူတယ်။ (မေမေ့သမီးနဲ့လည်း တူတယ် :P)
Posted by Rita at 5/10/2009 07:06:00 PM4comments Links to this post
Posted by Rita at 5/10/2009 01:03:00 PM6comments Links to this post
(ဆရာ မောင်စိန်ရဲ့ တစ်ကွက် ကာတွန်းနဲ့ ပေဖူးလွှာ)
WN >>> ဇာတ်ကောင်စရိုက် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောရဦးမယ်။ ဂျူး ဖန်တီးတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဟာ မြန်မာ မဆန်ဘူး။ မြန်မာစရိုက် မရှိဘူး လို့ ဝေဖန်ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ ဆရာမ ရှင်းပြနိုင်မလား။
Juu >>> ပထမဆုံး မြန်မာဆန်တယ် ဆိုတာကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာကြည့်ရင် မြန်မာဆန်တယ် ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ဟိုရှေးယခင် ကတည်းက ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ စရိုက် လက္ခဏာကို ပြောတာမဟုတ်လား။ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ရိုးသားတယ်။ သူများအပေါ် နိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အခက်အခဲတွေ့ရင် ကူညီ ဖြေရှင်း ပေးလေ့ရှိတယ်။ ပရိယာယ် မကြွယ်ဝဘူး။ ဟန်မဆောင်တတ်ကြဘူး။ ဒါ မြန်မာတွေရဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ character တွေပါ။ အဲဒီ character တွေကနေ သွေဖည်ပြီး ကျွန်မ ၀တ္ထု မရေးခဲ့မိသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မက မြန်မာလူမျိုး ပီပီ မြန်မာတွေရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်လို့ပါ။
မျက်နှာမလိုက်ဘဲ ပြောရစတမ်း ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာမဆို နည်းနည်း ညံ့တတ်တာ၊ တီထွင်ကြံဆမှု နည်းတာ၊ အရာရာမှာ နောက်ကျစွာ တွေးခေါ် မျှော်မြင်တတ်ကြတာ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲချင်ကြတာ၊ လှေနံဓားထစ် မှတ်ချင်ကြတာ အဲဒါတွေကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ မဟုတ်တဲ့ character တွေပါ။
အတွေ့အကြုံ တစ်ခုကို လှေနံဓားထစ် မှတ်လို့ မရတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် နည်းပညာ တစ်ခုဟာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးတည့်မယ်၊ သင့်တော်မယ် ဆိုရင် အသုံးပြုရမှာပဲ။ ကုန်းကြောင်းအတိုင်း လှည်းနဲ့ ဆယ်ရက် သွားရမယ့် ခရီးကို လေယာဉ်နဲ့ တစ်နာရီ အတွင်း အရောက် သွားနိုင်တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်နေကာမှ မြန်မာမှုကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး လှည်းယာဉ်ကလေးနဲ့ သွားချင်တဲ့လူများ ရှိပါသလား။ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။
မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ သားကို သခင်၊ လင်ကို ဘုရား ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချပြီး နေတတ်ကြတဲ့ စရိုက်မျိုးကိုတော့ ကျွန်မ ၀တ္ထုတွေထဲမှာ တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာတော့ ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီ အယူအဆမျိုးကို ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် မနှစ်သက်လို့ပါပဲ။
မိမိ လက်ထပ်ထားတဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ကိုးကွယ်ဖို့ ထိုက်တန်လောက်အောင် မြင့်မြတ်ရင်တော့ ဒီစကားအတိုင်း မြန်မာမှု ပီသစွာ နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလဲ ၀န်ထမ်း၊ ကိုယ်လဲ ၀န်ထမ်း။ သူလဲ အိမ်စီးပွားရေးကို ဒီအတိုင်းအတာထိပဲ ရှာနိုင်တယ်။ ကိုယ်လဲ ဒီအတိုင်းအတာထိပဲ ရှာနိုင်တယ်။ အဆင့်အတန်းချင်း တူပါရက်နဲ့ ကိုယ့်မှာ ပိုများတာက မီးဖိုချောင် ဝေယျာဝစ္စ၊ သားသမီး မွေးထုတ် ပြုစုရတဲ့ ဒုက္ခ ဒါတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ တာဝန်ပိနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူ့ခင်ပွန်းကို ဘုရားတစ်ဆူလို ကိုးကွယ် နေရဦးမှာလား။ ဒါဟာ တွက်ကပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိက ကတော့ အချိန်မပေးနိုင်မှုပဲ။
ဟိုခေတ်က မြန်မာမိန်းမတွေဟာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ငွေမရှာရဘူး။ သူတို့မှာ အိမ်ထောင် ထိန်းသိမ်းရတဲ့ တာဝန်ပဲ ရှိတယ်။ အခု မိန်းမတွေကတော့ အရင်လို သဘောမထားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ လူနေမှု စနစ်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု အတိုင်း အလိုက်သင့် မျောပါရတော့တာကိုး။
ဂျူး ဟာ ကျွန်မ နှစ်ခြိုက်လေးစားရတဲ့ စာရေးသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူဘာရေးရေး ကြိုက်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဘာပြောပြော သဘောတူတယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။
အထက်ပါ အင်တာဗျူးမှာလဲ ကျွန်မ နှစ်ခြိုက် သဘောကျတာတွေ အများကြီးပါ။ "ဒါဟာ တွက်ကပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ အဓိက ကတော့ အချိန်မပေးနိုင်မှုပဲ။" ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုတောင် ကျွန်မ post တစ်ခုမှာ ထည့်ရေးဖူးသေးတယ်။ ဟင်းချက်တဲ့ post ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာ သူ နည်းနည်းတော့ အပြော လောကြီးသွားတယ် ထင်မိတယ်။
ဥပမာ။ ။ မိမိ လက်ထပ်ထားတဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ကိုးကွယ်ဖို့ ထိုက်တန်လောက်အောင် မြင့်မြတ်ရင်တော့ ဒီစကားအတိုင်း မြန်မာမှု ပီသစွာ နေထိုင်ကျင့်ကြံဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလဲ ၀န်ထမ်း၊ ကိုယ်လဲ ၀န်ထမ်း။ သူလဲ အိမ်စီးပွားရေးကို ဒီအတိုင်းအတာထိပဲ ရှာနိုင်တယ်။ ကိုယ်လဲ ဒီအတိုင်းအတာထိပဲ ရှာနိုင်တယ်။ အဆင့်အတန်းချင်း တူပါရက်နဲ့... ဆိုတာမှာ နည်းနည်းတော့ ဟ သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ (သူ ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်မ နားလည် ခံစားမိပါတယ်။)
ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်ဖို့ ထိုက်တန်လောက်အောင် မြင့်မြတ် တာနဲ့ သူလဲ အိမ်စီးပွားရေးကို ဒီအတိုင်းအတာထိပဲ ရှာနိုင်တယ်။ ကိုယ်လဲ ဒီအတိုင်းအတာထိပဲ ရှာနိုင်တယ်။ အဆင့်အတန်းချင်း တူပါရက်... လို့ ယှဉ်ပြောလိုက်တာမှာတော့ သူ လောကြီးသွားတယ် လို့သာ မြင်မိပါတယ်။
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ယောက်ျားက မိန်းမထက် ပိုပြီး ငွေရှာ နိုင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာတော့ တခုထက်မကတဲ့ မြောက်မြားလှစွာသော အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကျွန်မ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့သူ ငွေရှာနိုင်တာချင်း တူတူမို့ ကိုးကွယ်ဖို့ ထိုက်တန်လောက်အောင် မဟုတ်ဘူးလို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သွားစေတာကတော့ မရည်ရွယ်ဘဲ လောကြီးပြီး ပြောမိတယ်လို့သာ မြင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်က မိမိ ခင်ပွန်း ယောက်ျားကို (ရှေးယခင်ကလို) အချိန်ရ၍ ဖြစ်စေ၊ (ယခုခေတ်လို) အချိန်မရဘဲ ဖြစ်စေ ကြင်နာယုယတယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်တယ် ဆိုတာဟာ သူက ပိုက်ဆံတွေ ရှာပေးနိုင်လို့ ၊ သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ့်မှာ (ဘာတာဝန်မှ မရှိလို့) အားပြီး အချိန်တွေပိုနေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမတွေရဲ့ မွေးရာပါ ချစ်ခင် ကြင်နာ ယုယချင်တဲ့ မိခင်စိတ်ကြောင့်ပါ။
ဒါကို ဂျူး လည်း ကောင်းကောင်း သတိပြုမိတာ သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း "မိန်းမ တစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်" ထဲမှာ ဒီလို ရေးခဲ့တာပေါ့။
"မိန်းမတွေရဲ့ မိခင်စိတ်ဟာ သားသမီးပေါ်မှာပဲ ရှိတယ်လို့ မောင့်ကို ဘယ်သူ သင်ပေးလိုက်သလဲ။ ဇနီးတစ်ယောက်က ခင်ပွန်း အပေါ်မှာ မိခင်စိတ်နဲ့ စောင့်ရှောက် ယုယတတ်တာကို မောင်ဖတ်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ရေးမထားဘူးလား။
ချစ်သူကို ဖိနပ်တိုက်ပေးတဲ့ အခါ၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပေးတဲ့ အခါ၊ ခြေအိတ်လျှော်ပေးတဲ့ အခါ ကျွန်ခံစိတ်နဲ့ လုပ်ပေးတာလို့ မောင်ထင်နေသလား။ ကျွန်တစ်ယောက်က သခင်တစ်ယောက်ကို ပြုစုသလို ပြုစုနေတာ မဟုတ်ဘူး။ မိခင်တစ်ယောက်က သားကို ပြုစု ယုယသလို ပြုစု ပေးနေတာ။ အဲဒါတွေဟာ ကျိုးနွံနာခံမှုတွေ မဟုတ်ဘူး၊ တာဝန် ၀တ္တရားတွေ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါ အချစ်တွေ"
Posted by Rita at 5/09/2009 11:40:00 PM4comments Links to this post
(လိပ်ခေါင်း ပျောက်ဆေး ကြော်ငြာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်းလေ။ မဖတ်ချင်ဘူးလား။ တခါတလေ ငယ်ငယ်က စာအုပ်ဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ရတာ feel ပဲ။ ငယ်ဘ၀ကို လွမ်းတယ်။ မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတယ်။ အညာကို လွမ်းတယ်။ !_!)
အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေထက်တောင် ရဲရင့်ထက်မြက်ကြတယ်လို့ ကျွန်မ ပြောရင် ကိုဝင်းငြိမ်း စိတ်မရှိပါနဲ့။ ရုပ်ရှင် တစ်ခု၊ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်ကြောင့် လမ်းမှားကို လိုက်သွားရလောက်အောင် တုံးတဲ့ မိန်းမမျိုး သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
တစ်ခု သတိရလို့ ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဟိုတလောက ဧပြီလထုတ် မဂ္ဂဇင်း တစ်ခုမှာ ထင်ပါရဲ့။ ဝေဖန်ရေး ဆရာ တစ်ဦးရဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ၀တ္ထုနာမည်၊ စာရေးဆရာ နာမည် တပ်ပြီး မရေးပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အမှတ်တရ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရေးသားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ နိဂုံးချုပ်ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အမှတ်တရ ကို မြန်မာ အမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေ မဖတ်သင့်ဘူးတဲ့။ ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်တဲ့ မိန်းကလေး အမျိုးအစားဟာ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြားပြီး ဟီရိသြတ္တပတရား ကင်းမဲ့တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးသာ ဖြစ်တယ်တဲ့။ (သူ့သမီးကတော့ အဲဒီ အထဲမှာ မပါဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။ အမှတ်တရ ကို သိပ်ကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ မကြာခဏ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချရတဲ့ မိန်းကလေး အတန်းအစားမျိုးတွေ လို့ ပြောသွားပါတယ်။ )
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မက ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချတဲ့ Case တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တခြား လူတွေထက် အမြင် ကြည်လင်စွာ ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဆေးခန်းကို ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ လွဲမှားစွာ မကြာခဏ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးကို သတ်ပစ်ရတဲ့ အထိ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ဖို့ မကြောက်ရွံ့ မတုန်လှုပ်ရလောက်အောင် သူတို့ကို ဘယ်အချက်တွေက တွန်းအားပေးခဲ့ပါသလဲ။ ဒါကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလို အမျိုးသမီးတွေကို နှစ်သိမ့် ဖျောင်းဖျရတာ၊ ပညာပေးရတာတွေကို ကျွန်မဖြင့် စိတ်တောင် ညစ်နေပါပြီ။ အဲဒီ အမျိုးသမီးတွေဟာ အများအားဖြင့် အိမ်ထောင်သည်တွေပါ။ (မအံ့သြပါနဲ့)။ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ ကျူးလွန်မိတဲ့ မိန်းကလေး အရေအတွက် နည်းလွန်းပါတယ်။ တချို့ မိန်းကလေးတွေကတော့ မရှောင်သာ မတိမ်းသာ ငွေအတွက် ရလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်တွေပါ။ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချင်တဲ့ မိန်းကလေး ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်က အတန်းပညာ မတတ်တဲ့ ဆင်းရဲသူ မိန်းကလေးတွေပါ။ အမှတ်တရ ကို မဆိုထားနဲ့။ ၀တ္ထုဆိုတာတောင် သူတို့ သိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖတ်ချိန်လဲ မရပါဘူး။ အများစုက သေစာ ရှင်စာလောက်ပဲ တတ်ကြတာ။
နောက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ အမှတ်တရ စာဖတ်ပရိသတ် အမျိုးသမီးတွေဟာ စုစုထွေးရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တဲ့ အချစ်၊ အနစ်နာခံနိုင်တဲ့ အချစ်၊ ချစ်သူအပေါ် မြူတမှုန် လောက်တောင် အပြစ် မမြင်နိုင်လောက်အောင် ချစ်တဲ့ အချစ် အပေါ်မှာ ခံစားတတ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ။ တစ်ခုခုကို ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ရဲရဲ မယူတတ်တဲ့ မောင့်ကို အပြစ်မြင်စိတ်နဲ့ စုစုထွေး အပေါ်မှာ ကရုဏာသက်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ။ ဝေဖန်ရေးဆရာများ သမုတ်ထားသလို ချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေခြင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကွက်မျိုးကို မမြင် မြင်အောင် ရှာကြည့်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ အတုယူ မှားလောက်တာတွေ၊ မမှားလောက်တာတွေနဲ့ ညာမနေပါနဲ့တော့။ ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ် မထားချင်ပါနဲ့တော့။ အရှိကို အရှိအတိုင်းပဲပေါ့။ လူဆိုတာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မြတ်နိုးတာပဲ။ တစ်ပါးသူရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မနှောင့်ယှက်ဘူး ဆိုရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ပါစေလား။ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ပြီး ရဲရင့်စွာ ယုံကြည်တတ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်မျိုးကို ဖန်တီးမိတဲ့အတွက် ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဂျူးရဲ့ စကားလုံးတွေ နောက်မှာ ခါးသီးမှုတွေ ရှိနေမှာကတော့ သေချာသပေါ့ရှင်။ လူဆိုတာ ကိုယ့် ဖန်တီး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိပါးလာရင် ဘယ်သူမဆို နာတတ်တာတွေချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေကို ထိန်းချုပ်စောင့်စည်း နိုင်ပြီး၊ ကိုယ့် အဆင့်အတန်းက ဘာဆိုတာကို ပြသတတ်ဖို့ လိုတယ် လို့ ကျွန်မ ခံစားမိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ celebrity ဖြစ်နေပြီလေ။
celebrity မှန်သမျှ ဒါမျိုး ပွဲဆူလေ့ ရှိပြီး၊ နောက်တော့ ပြောတဲ့လူတွေ တိတ်သွားတာပဲ လို့တော့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဖြစ် ပျက်ပုံ၊ တုန့်ပြန်ပုံတွေက ကွာခြားပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ ပြီးသွားမှာချည်းပါပဲ။ ဘယ်သူမှ 24 hr ထိုင်မပြော နိုင်ပါဘူး။ ပြောတဲ့လူတွေ တိတ်သွားလို့ celebrity က အောင်မြင်ပြီး ကျန်ခဲ့တာပဲ လို့ ယူဆရင်တော့ ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါ။
အထိမခံ ရွှေပန်းကန် (ရွှေရည်စိမ်) နှုတ်သီးကောင်း လျှာပါး ကတ်ကတ်လန် နေတာတွေကို ဒီ interview ဂုတ်ဆွဲပြီး ပြချင်တယ်။
၀န်ခံချက်။ ။ ဂုတ်ဆွဲပြီး ပြချင်တယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ယခု အကြောင်းအရာနှင့် ကိုက်ညီ၍ နှစ်သက်မိသဖြင့် ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် blog တစ်ခုမှ ယူသုံးပါသည်။
Update (23rd Aug 2009): ဂျူးဟာ ဒီနေရာမှာ သူ့ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ပါးပါးနပ်နပ် ပြသသွားနိုင်ခဲ့လို့ သူ့ ပရိသတ်ဖြစ်ရတာ အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။တ၀က်တပျက်နဲ့ လာဖတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်ဆိုလိုရင်းကို မမိမှာ စိုးလို့... update ကို ဖြည့်စွက်လိုက်ရပါကြောင်း...)
Posted by Rita at 5/09/2009 04:41:00 PM4comments Links to this post
Posted by Rita at 5/09/2009 01:26:00 PM6comments Links to this post
Posted by Rita at 5/03/2009 02:03:00 AM4comments Links to this post
(ဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အတွင်းပိုင်း အပြင်အဆင်)
(ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး ထမင်းချဉ်- ၀က်သားနဲ့)
ကျွန်မက တိုင်းရင်းသား အစားအစာ တွေထဲမှာ ရှမ်းစာတွေကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
Loi Nine ကို ဒေစီပိုင် တို့ Zephyr တို့ ကြော်ငြာနေကတည်းက စားချင်နေတာ... မနေ့ကတော့ အရောက်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ငတ်နေတုန်းလဲဖြစ်... အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေလည်း ဖြစ်တော့ ကောင်းလိုက်တာ အလွန်ပါပဲ။ ဘာစားစား ကောင်းနေတော့တာ။ နောက်လဲ မကြာခဏ သွားစားဖြစ်မှာ သေချာတယ်။ (ဆိုင်ခန်းတော့ ချဲ့ဖို့လိုပြီ)။
ထမင်းချဉ်ကို ၀က်သားနဲ့ စားခဲ့တယ်။ :))
Steve ကပြောတယ်။ သူ ၀က်သား မကျက်တကျက်နဲ့ Sandwich စားလိုက်တာ ပိုပြီးများတောင် အားပြည့်လာတယ် ဆိုပဲ။
(Steve နဲ့ Strike စကားတော့ ချင့်ယုံကြပါလေ။ သူတို့ နှစ်ယောက်က တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက် တလေတည်းထွက်)
ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ရှားပါး ရုပ်ရှင် ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ အတွင်းပိုင်းကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
> ညီလင်းဆက် ဘလော့မှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ မြန်မာ မင်းသမီး "၀င်းမင်းသန်း" ပါတယ် ဆိုတဲ့ "Purple Plain"
> ကိုရန်အောင် You Tube ကနေ သူ့ဘလော့ပေါ် တင်ဖူးတဲ့ "Burmese Harp"
> "Beyond Rangoon" စတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ
> ၀င်းဦး၊ ၀ါဝါ၀င်းရွှေ၊ ခင်ယုမေ၊ မေ၀င်းမောင် တို့ပုံတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Peninsula Plaza ရဲ့ Ground Floor မှာ ရှိပါတယ်။
Posted by Rita at 5/02/2009 07:17:00 PM9comments Links to this post